सेम्पल्टबाट २०२१ को शीर्ष SEO एसईओ रणनीति: यदि तपाईंले यसो गर्नुभएन भने, तपाईं आफ्नो SEO स्क्र्याचबाट पुनः सुरु गर्नुहुनेछ!
गुगलबाट बीईआरटी एल्गोरिथ्मको सुरूवात र यान्डेक्स, भेगाबाट ठूलो स्तरको अद्यावधिकको साथ खोजी ईतिहासमा विशेष चरण आएको छ। र इन्टरनेटमा नहुनको लागि व्यवसायले गुणस्तरीय सामग्री र प्रयोगकर्ता अनुभवको बारेमा सोच्नु पर्छ, साथ साथै सर्च इन्जिन सल्लाहहरू पनि दिनुपर्नेछ। यस कारणका लागि, सर्वश्रेष्ठ SEO को कम्पनी, Semalt, २०२१ को शीर्ष SEO SEO रणनीतिहरू सँगै राख्ने निर्णय गर्नुहोस्। आउनुहोस्!
१. खोजीको इतिहासमा नयाँ चरण आयो
यो Google BERT बाट नयाँ एल्गोरिथ्मको प्रक्षेपण र याान्डेक्स "भेगा" बाट ठूलो स्तरको अद्यावधिकको कारण हो।
दुबै प्रविधिहरू न्यूरल नेटवर्कमा आधारित छन्, जसले प्राकृतिक भाषालाई राम्रोसँग बुझ्न र प्रक्रिया गर्न मद्दत गर्दछ।
२०२१ को पूर्व संध्यामा प्रस्तुत भेगा खोज अपडेटले खोजीलाई गुणस्तरको नयाँ स्तरमा पुर्‍यायो। यसले तुरून्त चार क्षेत्रलाई असर गर्यो:
सर्वप्रथम, कम्पनीले खोजको गुणस्तर बढाउने घोषणा गर्‍यो - किवर्डबाट मात्र नभई अर्थले पनि।
दोस्रो, खोज ईन्जिनले प्रयोगकर्ता अनुरोधहरूमा एक द्रुत परिणामको प्रतिज्ञा गर्‍यो।
तेस्रो, Yandex ले जवाफहरूको विशेषज्ञतामा विशेष जोड दिन थाल्यो - नयाँ र्याकिंग एल्गोरिथ्मको लागि धन्यवाद, जसको लागि मुख्य संकेत निर्धारणकर्ता-विशेषज्ञहरूको मूल्यांकन, र किउ सेवा हो।
चौथो, भेगा यान्डेक्सको सुरुवातको साथमा हाइपरलोकल भयो: यसले माइक्रोडिस्ट्रिक्टको स्तरमा वा छुट्टै घरसमेत समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
र अब प्रत्येक व्यवसायले कसरी बीईआरटी र भेगाका लागि सामग्री अप्टिमाइज गर्ने भनेर जान्न चाहन्छ। मूल रूपमा, यसको अर्थ सामग्रीको खोजीका लागि प्रयोगकर्ता पहुँच पोइन्ट्सको पुनर्मूल्यांकन गर्नु हो। मानिसहरूसँग अब चलाख खोजीका लागि अधिक अवसरहरू छन् र विशेषज्ञ र सही जवाफहरू प्राप्त गर्न, कम्पनीहरूले साइटहरूको आर्किटेक्चर र सामग्री डेलिभरीको विधिहरूमा दुबैलाई विचार गर्न आवश्यक छ।
कसरी साइट सामग्री आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदैछन्
लेख्नको लागि अनुरोध मात्र आवश्यक पर्दैन, तर प्रयोगकर्ताको मनसायलाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरूलाई खोजी गर्ने छ।
कीवर्ड विश्लेषण, हामीलाई थाहा छ कि अप्रचलित हुँदै गइरहेको छ। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण र गहिरो सिक्ने टेक्नोलोजीहरू द्रुत रूपमा विकास गर्न जारी राख्छ, त्यसैले तपाइँले तथ्यलाई तयार पार्नु पर्छ कि खोज इञ्जिनहरू कुञ्जीशब्दहरू, तर प्रयोगकर्ताको लक्षितको रूपमा बढी रुचि राख्दैनन्। यो यसबाट पनी प्रयोक्ताको आशय विश्लेषण गर्न र उसको आवश्यकतालाई पूरा गर्न प्रयास हुनुपर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँका प्रश्नहरूको उत्तम जवाफ दिनुहुन्छ भने, तपाइँ ग्राहकहरुलाई छिटो आकर्षित गर्नुहुन्छ।
Semalt ले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताहरू कसरी उनीहरूको चिन्ता र आवश्यकताहरूको कुराकानी गर्न मा केन्द्रित गर्न आमन्त्रित गर्दछ। प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया विस्तार हुँदैछ र खरीद मात्र बढ्छ। अब सामग्री छ कि बिक्री पछि आवश्यकताहरु लाई महत्वपूर्ण छ - समर्थन, चासोको संरक्षण, समुदायको निर्माण र विकास, आदि।
यो एसईओ प्रवृत्ति व्यवसायको लागि के अर्थ हो?
ग्राहक अझै पनी जान्न चाहन्छन् कि तपाईं उनीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ, कि तिनीहरूले तपाईंमाथि विश्वास गर्न सक्छन्। त्यसकारण, २०२१ का परिवर्तनहरू मुख्यतया सूचना खोजीको गुणस्तर, यसको "मानव" पक्षको विकासको सुधारको साथ सम्बन्धित छ।
धेरै बजारहरूले अझै पनि सेवाहरू बेच्छन, लक्षित दर्शकहरूसँग संचारलाई वेवास्ता गर्दै। तर यदि हामी ग्राहकहरु संग कुरा गर्दैनौं, हामी बुझ्न सक्दैनौं किन तिनीहरू एक निश्चित तरिकाले व्यवहार गर्छन्।
तिनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूलाई किनकी उनीहरूको शपिंग यात्रा, उनीहरूले कसरी खोजी प्रयोग गरे, तपाईंको साइटको बारेमा उनीहरू के सोच्छन् भनेर सोध्न भन्नुहोस्। साइटमा निर्णय लिँदा यो डाटा प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ता-उन्मुख अनुकूलन केवल एसईओ समाधानहरू मार्केटिंग रणनीतिमा एकीकृत गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। र यो २०२१ को सब भन्दा शक्तिशाली र आवश्यक प्रवृत्ति हो। Semalt ले यो गोप्य कुरा बुझ्दछ र त्यसैले कम्पनीहरूलाई एसईओ माध्यमिक चासोको रूपमा हेर्न रोक्न आमन्त्रित गर्दछ। अनुकूलन को रूप मा सम्पर्क गर्नुपर्छ एक व्यवसाय योजना को एक प्रमुख घटक।
२. प्रयोगकर्ताका लागि सिर्जना गरिएको गुणवत्ता सामग्रीले भूमिका खेल्छ
एसईओ को "रक्ताभिसरण प्रणाली" सामग्री थियो र रह्यो। र नयाँ के हो, तपाइँ सोध्नुहुन्छ? कम गुणस्तरको सामग्रीले नकरात्मक रूपमा सबै कुरालाई असर गर्न सक्दछ - दुबै साइटको संरचना, र आन्तरिक लिंकहरूको रणनीति, र अरू सबै।
२०२१ मा साइटको राम्रो विकासको लागि, तपाईंले प्रासंगिक र मूल्यवान सामग्री कसरी लेख्ने भनेर सिक्नुपर्नेछ। विज्ञहरू भविष्यवाणी गर्छन् कि समय आउने छ जब केवल उत्कृष्ट सामग्रीहरू शीर्ष मुद्दामा जान्छन्।
उत्तम विषय प्रकाशित गर्न एक लक्ष्य सेट गर्नुहोस् जुन तपाईंको शीर्षकमा इन्टरनेटमा फेला पार्न सकिन्छ। वा कमसेकम यसमा रुचि बढाउनको लागि प्रासंगिक शीर्षकको महत्त्वपूर्ण अंश प्रकट गर्नुहोस्।
यसले तपाइँलाई कुञ्जी शब्दहरूको खोजीमा प्रभावकारी रूपमा "लामो पुच्छर" को साथ प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनेछ (यसले अझै प्रायः खोज क्वेरीहरू बनाउँदछ), र साइटको विश्वसनीयता र तपाईंको सामग्रीको माग बढाउन मद्दत गर्दछ।
२०२१ एक बर्ष हो जब तपाईले बिस्तारै कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गरेर जुनसुकैबाट मुक्त हुन आवश्यक पर्दछ। व्यक्तिगत कुञ्जी शब्दहरूमा ध्यान दिन रोक्नुहोस्, पृष्ठहरू पछाडि र सामग्रीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
शीर्षकहरूमा फोकस गर्नुहोस्। सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन विशेष मुद्दालाई कभर गर्दछ, र मात्र एक कुञ्जी शब्दको अर्थ खुलाउँदैन।
तपाईं कुनै खास शीर्षकमा विस्तृत र बुझ्ने ज्ञानको साथ पाठको श्रृंखला पनि योजना गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष व्यवसाय लक्षहरु प्राप्त गर्न को लागी उपयोगी छ।
कम्पनीहरूले साइटमा धेरै कार्यहरूको सामना गर्दछ, जुन ग्राहक सेवासँग नजिकबाट सम्बन्धित छ:
दर्शकहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्, कसरी खोजी गर्ने भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्न र उनीहरूले समाधान गर्न चाहने समस्याहरूको पछाडि रहेका अभिप्रायहरू बुझ्नुहोस्।
उनीहरूलाई ढाँचामा समाधान वा उत्तर दिनुहोस् जुन उनीहरू गुणस्तरीय विशेषज्ञ सामग्री प्रयोग गर्न रुचाउँदछन्।
तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नुहोस्। भोली कसैले यो तपाईं भन्दा राम्रो गर्न सक्छन्।
सबै सामग्री अडिट गर्नुहोस् ताकि प्रत्येक पृष्ठमा कुञ्जी शव्दहरूको एक अद्वितीय सेट छ। यदि तपाइँको साइटले निरन्तर एउटै बिषयलाई समाहित गर्दछ, बिभिन्न स्थानबाट यद्यपि पृष्ठहरु एक अर्कालाई खोज परिणामबाट बाहिर ढकढक्याउँदछ।
२०२१ मा, सामग्रीको गुणवत्तालाई गम्भीरताका साथ मूल्याate्कन गर्नुहोस् र प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयुक्त बनाउनुहोस्, खोजी ईन्जिनहरू होइन।
एक अर्थमा, २०२१ मा सफलताको कुञ्जी उही रहन्छ: तपाईंले प्रचार गरिरहनु भएको सबै च्यानलहरूमा राम्रो सामग्री प्रस्ताव गर्नुहोस्। जब खोज ईन्जिनले प्राकृतिक भाषालाई अनुकूल बनाउँछ, साक्षर र पढ्नयोग्य पाठहरूको मान बढ्छ।
User. प्रयोगकर्ताको आत्मविश्वासको लागि संघर्ष कडा छ, सफलताको कुञ्जी विशेषज्ञता हो
मे २०१ In मा, Google ले यसको गुणवत्ता मूल्यांकन गाइड अपडेट गर्‍यो, जसमा ECT को सिद्धान्त (विशेषज्ञता, विश्वसनीयता, विश्वास) पृष्ठ गुणवत्ता रणनीतिको हिस्सा भयो।
२०२१ मा, खोज इन्जिनले कम्पनी र तिनीहरूको तर्फबाट सामग्री प्रकाशित गर्ने व्यक्तिको प्रतिष्ठा अध्ययन गर्न जारी राख्नेछ। तसर्थ, कम्पनीहरूसँग जुन प्रतिष्ठाका साथ समस्याहरू छन्, ग्राहक सेवामा कठिनाइ छ र असफल रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको विश्वासको लागि स fighting्घर्ष गर्दै, यो प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ।
Yandex पनि विशेषज्ञता मा निर्भर गर्दछ। खोजीमा केहि शीर्षकहरूमा विशेषज्ञता एक्सेसरहरू छन्। तिनीहरूले मूल्या pages्कन गर्दछन् कि वेब पृष्ठहरूले उनीहरूको विशिष्टताको लागि अनुरोधलाई कसरी जवाफ दिन्छन्, र तिनीहरूको रेटिंगहरू एल्गोरिथ्म सिक्नमा ठूलो भूमिका खेल्दछन्। यस दृष्टिकोणले विभिन्न प्रश्नहरूको लागि स्तर निर्धारण गरेको छ।
वेबसाइट सामग्री आवश्यकताहरू कसरी परिवर्तन हुँदैछन्
आत्मविश्वास मुद्दाहरू केवल ब्राण्ड समीक्षा र समीक्षामा मात्र प्रकट हुन्छन्, तर साइटमा प्राविधिक खराबीका साथै साइट सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पनि प्रकट हुन्छन्।
२०२१ मा, विश्वसनीयता को सिद्धान्त एक भूमिका खेल्छ। स्रोतहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ, किनकि नक्कली समाचारहरू युद्धको रूपमा घोषित भएको छ। यस सन्दर्भमा, लेखकहरूले आफैंलाई जाँच्नु महत्त्वपूर्ण छ, निश्चित विषयहरूमा उनीहरूको दक्षता प्रदर्शन गर्नु अघि।
२०१२ को एक मुख्य प्रवृत्ति - अफलाईन अनलाईनमा जान्छ। र हाम्रो अफलाइन संसारको एक आकर्षक अनलाइन छवि सिर्जना गर्न व्यापारको क्षमता यसको मुख्य लाभ हुनेछ।
सबै अफलाइन घटनाहरू, सम्मेलनहरू, पुरस्कारहरू, साझेदारीहरू जुन Google बाट लुकाइएको छ, अचानक ठूलो महत्त्वको हुन जान्छ। गुगलको विश्वसनीयताको लागि आवाश्यकता पूरा गर्न तिनीहरूलाई अनलाइन तान्नुहोस्।
विज्ञहरूले धेरै तरीकामा साझेदारी कसरी गर्न सक्छन् कसरी एक व्यापार एक प्रतिस्पर्धी लाभ अनलाइन प्रदर्शन गर्न सक्दछ:
डेलिभरी गति (उदाहरणका लागि २ दिन भित्र डेलिभरी (वा कम) सम्बन्धित स्थिति अपडेटहरू सहित);
ग्राहक सेवा (उदाहरण को लागी, सकेसम्म चाँडो प्रयोगकर्ता प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने क्षमता);
डिजिटल करिश्मा/ब्रान्डि ((उदाहरण को लागी, तपाईका धेरैजसो समीक्षाहरू प्रेमको घोषणाहरू जस्तै छन्);
प्रयोगकर्ता अनुभव (अनुभवलाई अधिक सुविधाजनक/उपयोगी/सरल भन्न सकिन्छ);
मूल्य र आला उत्पादनहरू।
User. प्रयोगकर्ता अनुभव पहिले भन्दा बढि प्राविधिक एसईओ अनुकूलन मा निर्भर गर्दछ
उपचार गर्न पर्ने अर्को टाउको दुख्ने प्रयोगकर्ता अनुभव हो। यसले व्यापारको सामान्य प्रभाव समावेश गर्दछ, खोजी परिणामहरूमा तपाईंको स्रोतसँग पहिलो अन्तर्क्रियाको साथ शुरू हुन्छ, र त्यसपछि ल्यान्डि page पृष्ठ र प्रयोगकर्ताले तपाईंको साइट छोड्ने तरिकाबाट पनि (कम से कम उपकरणहरू सम्झनुहोस् जुन सामान्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि पुनःबजारिकरण र निजीकरण जस्ता कम से कम उपकरणहरू सम्झनुहोस्। )।
तपाईं कसरी आफ्नो कम्पनी को प्रयोगकर्ता अनुभव आकार मा सोच्नुहोस्। तिनीहरूले साइटमा जाँदा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ?
प्रयोगकर्ता अनुभव प्राविधिक एसईओ अनुकूलन सम्बन्धित छ। र सबै भन्दा पहिले, तपाईं साइट को गति र यसको पृष्ठहरु मा ध्यान दिन आवश्यक छ।
तपाईंले विकासकर्ताहरूसँग अधिक पटक कुराकानी गर्नुपर्नेछ। केहि अवस्थाहरूमा, पृष्ठ टेम्पलेटहरूको लगभग पूर्ण पुनः डिजाइनको लागि तयार हुनुहोस्।
User. प्रयोगकर्ताको हेरचाह गर्दै - यो मोबाइल एसईओ पनि हो
साइटहरूको मोबाइल संस्करणहरू प्राय: अव्यवस्थित अवस्थामा हुन्छन्। र २०२१ मा, धेरै कम्पनीहरूले २०१ 2017 को अभ्यास याद गर्नुपर्नेछ र अन्तमा, साइटको मोबाइल संस्करण क्रममा राख्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं अझै मोबाइल उपकरणको लागि अनुकूलित एक साइट संस्करण छैन भने, तपाईं यो कार्य प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ।
तपाईंको मोबाइल साइट प्रयोगकर्ताका लागि कत्तिको प्रभावकारी छ तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ। सायद तपाई अझै डेस्कटप कम्प्युटरमा बसिरहेको व्यक्तिलाई कल्पना गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै जसो यो व्यक्ति चालमा रहेको बेला मोबाईल उपकरण मार्फत तपाईंको साइट पहुँच गर्दै।
अर्को व्यवसाय चुनौती वास्तविक मोबाइल खोजी परिणामहरूको विश्लेषण गर्नु हो। यो ट्राफिकको पूर्वानुमान गर्न र कुन अप्टिमाइजेसन वास्तवमा प्रभावकारी हुनेछ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।
Search. खोज ईन्जिनलाई स्मार्ट खोज सल्लाह दिन सिक्नुहोस्
त्यसोभए, हामीले निर्णय गर्यौं कि २०२१ मा सामग्रीको गुणवत्ता फरक पर्नेछ। यद्यपि खोज ईन्जिन एल्गोरिदमले अझै पनि प्रयोगकर्ता प्रश्नहरूको प्रसंग पूर्ण रूपमा बुझ्दैन। त्यसकारण, व्यवसायले उनीहरूलाई "स give्केत" दिनु पर्छ।
यसको मतलब यो हो कि डाटालाई यस तरीकाले संरचना गर्नु आवश्यक छ कि खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको साइटको पृष्ठमा के हो भनेर मात्रै बुझ्न सक्दछ, तर प्रत्येक तत्व कसरी पृष्ठमा अन्य तत्वहरूसँग सम्बन्धित छ र यो पृष्ठ कसरी लिंक छ। साइटमा अन्य पृष्ठहरू।
यदि सही तरिकाले गरियो भने, संरचित डाटा मार्केटिंग डेटाको अंश बन्नेछ। र यसको परिणाम स्वरूप तपाइँले कुनै पनि खोज इञ्जिन, आवाज सहायक, च्याट बोट सही प्रसंगको लागि सामग्री प्रकाशित गर्न अनुमति दिनेछ।
संरचित डाटा एनालिटिक्स सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले सामग्रीको परिणामलाई कति असर गर्छ भनेर मूल्याate्कन गर्न मद्दत गर्दछ, र सामग्री रणनीति, मार्केटि marketing रणनीति, उत्पादन वर्णन सिर्जना गर्न र अधिकमा यो डेटा प्रयोग गर्दछ।
Know. ज्ञान ग्राफ र Yandex न्यूरल नेटवर्क को लागी सामग्री अनुकूलन गर्नुहोस्
गुगलले सिमेन्टिक टेक्नोलोजी र ज्ञान आधार ज्ञान ग्राफ प्रयोग गर्दछ खोज इन्जिनलाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित खोज जानकारीको साथ।
यस उपकरणले विषयको बारेमा संरचित विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ साथै अन्य साइटहरूमा लिंकहरूको सूचीको अलावा। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य साइटहरूमा स्विच गर्न र तिनीहरूको आफ्नै जानकारी स collect्कलन गर्न पर्ने आवश्यकतालाई हटाउँदछ।
यानडेक्स न्यूरल नेटवर्कको मद्दतको साथ डाटाबेसमा पूर्व-पहिचान गर्दछ वेब अर्थमा समान र कागजात क्लस्टरहरूमा तिनीहरूलाई जोड्दछ। प्रयोगकर्ताले एउटा अनुरोध गर्दछ, र खोज इञ्जिनले सम्पूर्ण विशाल डाटाबेसमा उत्तर खोज्दैन, तर कागजातहरूसँग मात्र क्लस्टरहरूमा जुन अर्थ भित्र अनुरोध मिल्छ।
किनकी खोजीले कागजातहरूको कुन क्लस्टरहरू अनुरोधसँग प्रासंगिक छन् बुझ्दछ, उत्तरको लागि यसले उत्तम वेब पृष्ठहरू चयन गर्दछ जुन स्पष्ट रूपमा उपयुक्त छ।
सबै भन्दा पहिले, यो व्यवसाय को लागी ज्ञान को अनौंठो नेटवर्क को लागी बुझ्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि यो सिर्जना गर्दछ। यस पछि, केहि वस्तुहरू र संस्थाहरू हाइलाइट गर्न आवश्यक छ जुन साइटमा पोष्ट गरिएको जानकारी बाँध्न सम्भव छ।
अर्थपूर्ण नजिक विवरणहरू सिर्जना गर्नाले प्रयोगकर्ता अनुरोधहरूमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँले विशेष उद्योग अध्ययन प्रकाशित गर्नुभयो र विज्ञहरूबाट प्रासंगिक सिफारिशहरू साझा गर्नुभयो भने, यसले तपाइँलाई बजारमा सूचनाको प्रमुख स्रोतहरू मध्ये एक रहन अनुमति दिनेछ, र खोज इञ्जिनले यी सबै सामग्री वस्तुहरूलाई समग्रमा विचार गर्न थाल्नेछ।
Links. लिंकहरू र ब्रान्डसँग काम गर्ने प्रविधि परिवर्तन हुँदैछ।
२०२१ मा, लिंकहरू पनि प्रयोगकर्ता उन्मुख हुनुपर्नेछ। व्यवसायले लि links्कसँग काम गर्नुपर्नेछ जुन साइटको श्रेणी निर्धारणमा मात्र मद्दत गर्दछ, तर यातायात ड्राइभ गर्दछ।
यसको मतलव तपाईले सामग्रीसँग काम गर्ने तीन पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ:
योजना गरिएको लेख: शीर्षकहरू जुन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित क्षणमा ढाकिएको हुन्छ (उदाहरणका लागि ब्ल्याक फ्राइडे)।
योजना गरिएको लेख-प्रतिक्रिया: मौसमी घटना वा शीर्षकहरूको लागि रुचि एक निश्चित समय मा बढ्न सम्बन्धित विषयहरूमा सामग्री।
लेख प्रतिक्रिया - यहाँ के लेखिएको छ र अब आपतकालमा समाचार फीडको प्रतिक्रियाको परिणामको रूपमा। अगाडि योजना गर्न सम्भव छैन।
अब, लिंक निर्माण गतिविधि ब्रान्डको छाता अन्तर्गत गरिनु पर्दछ। व्यक्तिहरू चलाख हुँदै छन् र मार्केटिंगबाट अधिक अपेक्षा गर्छन्।
अधिक ग्राहकहरूले तपाईलाई विश्वास गर्छन्, तिनीहरू तयार छन्:
लिंकहरू प्रयोग गरेर तपाईंको सामग्री साझा गर्नुहोस् (तपाईं यातायात ल्याउनुहोस्);
तपाईंको बारेमा कुरा गर्नुहोस् (तपाईंको मूल्य प्रदर्शन गर्नुहोस्);
तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्नुहोस् (तपाईंलाई आय ल्याउनुहोस्)।
Matters। के महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सक्रिय दृश्य हो, वास्तविक दृश्यता हो।
शून्य क्लिकको साथ जारी एक वर्ष पहिले वास्तविकता भयो। यस सम्बन्धमा, व्यवसायले क्लिक नगरीकन खोजमा अनुकूलन गर्नुपर्नेछ।
मार्केटिंग गतिविधिहरू खोजी ईन्जिनहरूमा बढ्दो रूपमा बन्द हुन्छन्, जबकि योभन्दा पहिले साइटहरूमा मुख्यतया गरिएको थियो।
उदाहरण को लागी, Yandex ले पूर्व रेन्डरिंगको प्रविधि - पूर्व लोडिंग खोज परिणामहरू प्रस्तुत गर्‍यो। यो यति स्मार्ट छ कि यसले खोज क्वेरीको पूर्ण पाठ कस्तो देखिन्छ भनेर अनुमान गर्छ जब एक व्यक्तिले केवल पहिलो शब्दहरू टाइप गरिरहेको हुन्छ।
प्रि-रेन्डरिंगले पूर्व खोजी खोजी परिणामहरू दिन्छ र प्रयोगकर्तालाई देखाउँदछ जब तपाईं "फेला पार्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ। केहि प्रश्नहरूको लागि, उत्तरहरू खोजी बारको मुनि प्रम्प्टमा सिधा दिइन्छ।
टर्बो पृष्ठहरूको टेक्नोलोजी नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जब मोबाइल उपकरणहरूको प्रयोगकर्ता खोजीबाट साइटमा जान्छन्, वेब पृष्ठहरूका विशेष संस्करणहरू तुरून्त खोल्दछन्।
बजारलाई अब नयाँ सर्तहरू अनुकूल पार्न र खोजी ईन्जिनहरूमा भित्र के प्रदर्शित हुने बारेमा बढि जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक छ। पाठ टुक्राहरूको यो अप्टिमाइजेसन, र छविहरूमा जोड, आदि।
र फेरि, मोबाइल उपकरणको प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस्। २०१ 2019 मा, याान्डेक्सले टर्बो पृष्ठहरूको टेक्नोलोजीमा सुधार गर्‍यो: अब प्रणाली साइटको नियमित मोबाइल संस्करण भन्दा १ 15 गुणा छिटो लोड हुन्छ। यसको मतलब 75।% केसमा प्रयोगकर्ताले आवश्यक जानकारी एक सेकेन्ड भन्दा कम समयमा प्राप्त गर्दछ।